ပင်မစာမျက်နှာ / မီးဖိုချောင် faucets / အိုး Filler Faucets Brushed Nickel တွင် / WOWOW နံရံပေါ်က Pot Filler
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 5.005ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 19 ဖောက်သည် ratings
၎င်း၏ Ergonomics ဒီဇိုင်းကြောင့်သံမဏိပြားတပ်ဆင်ထားသောသံဖြည့်အိုးသည်သုံးရလွယ်ကူသည်။
2311300 installation ကိုညွှန်ကြားချက်
Brushed nickel အိုးဖြည့်ဆေး faucet 2311300
သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာလည်ပတ်နိုင်အောင်နှင့်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်သင်၏အသစ်သောမီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းတွင်အထူးအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ထိုအခါဤ brushed နီကယ်အိုးဖြည့်ဆေး faucet သင်တို့အဘို့အရာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်၏မီးဖိုချောင်ထဲမှရေအိုးကြီးများကိုသင်၏မီးဖိုသို့သယ်ဆောင်ရန်သင်ရုန်းကန်နေရသလော။ ဒီအဆင်မပြေ WOWOW ၏ဤ brushed နီကယ်အိုးဖြည့် faucet နှင့်အတူအတိတ်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ချက်ပြုတ်areaရိယာအနီးရှိရေနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်သင့်အားမီးဖိုချောင်မီးဖို၏နောက်ကွယ်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်အိုးသုတ်ဆေး faucets များတပ်ဆင်ထားသည်။ အထူးသဖြင့်အိုးကြီးများကိုရေနှင့်ပြည့်အောင်ဖြည့်ရန်လိုသည့်အခါ၎င်းသည်အထူးသင့်တော်သည်။ အိုးတွေကိုပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူး။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့်သင်၏လက်များသို့မဟုတ်လက်ကောက်ဝတ်များကိုတင်းမာရန်မလိုချင်ပါက၎င်းသည်သင်၏မီးဖိုချောင်သက်သာမှုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
WOWOW ၏ brushed nickel pot filler faucet ၏နောက်ထပ်သာယာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာသင်၏မီးဖိုခန်းမီးဖိုကိုလွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းနိုင်သည့်အပြင်အနီးအနားရှိရေနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိုးဖြည့်ဆေး faucet နှင့်အတူသန့်ရှင်းရေးအများကြီးပိုလွယ်သည်။ WOWOW ၏ brushed nickel အိုးဖြည့်သည့် faucet သည်ယိုစိမ့်မှုကင်းသောအတွေ့အကြုံကိုအာမခံနိုင်ရန်အတွက်ကြွေပြားနှစ်လုံးကိုကြွေများတပ်ဆင်ထားသည်။ အကယ်၍ အဆို့ရှင်တစ် ဦး သည်ပွင့်လင်းစွာနေမည်ဆိုပါက၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုပေါက်ကြားစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏မီးဖိုခန်းမီးဖိုသည်အမြဲတမ်းခြောက်သွေ့နေစေရန်သေချာစေရန်အဆို့ရှင်နှစ်ခုစလုံးကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသင့်သည်။ စိတ်မကောင်းခြင်းထက်လုံခြုံမှုရှိပါစေ။
ခေတ်သစ် brushed နီကယ်အိုးဖြည့်ဆေး faucet
WOWOW ၏ brushed nickel အိုးဖြည့်ထားသော faucet တွင်ခေတ်သစ်အမြင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ထပ်ဆောင်းတန်ဖိုးအပြင်သင့်မီးဖိုချောင်အားအထူးဆန်းသစ်သောထိတွေ့မှုကိုပေးသည်။ အိုးဖြည့်စွက်ဆေးရည်များကိုမသိသောကြောင့်လူအများစုကသင်၏မီးဖိုချောင်ကိုတွေ့သောအခါသင့်အကြောင်းမေးလိမ့်မည်။ မီးဖိုချောင်တွင်အသေးငယ်ဆုံးဆုံမှတ်များသည် faucets ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်၏မီးဖိုချောင်ကိုကြည့်သောအခါမီးဖိုချောင်သုံးရေကန်များမှလူများအာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံရသည်။ ဒီ brushed nickel pot filler faucet သည်မည်သည့်ခေတ်မီမီးဖိုချောင်အလှဆင်ပစ္စည်းနှင့်မဆိုကိုက်ညီသောကြောင့်အထူးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိစေမှာပါ။
WOWOW ၏ brushed nickel pot filler faucet သည်သင်၏မီးဖိုချောင်နှင့်သက်ဆိုင်သောသဟဇာတဖြစ်စေသောစည်းလုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အခြားခေတ်မီမီးဖိုချောင်သုံး faucets များနှင့်အလွယ်တကူပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောနှစ်ထပ်ကိန်းလိုင်းများသည်အပျော်အပါးလိုက်စားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ WOWOW ၏ဒီဇိုင်နာများကိုအဆင့်မြင့်မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်ထိပ်တန်းမဂ္ဂဇင်းတွင်အလွယ်တကူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်မည်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းများအဖြစ်နိုင်ငံတကာမှအသိအမှတ်ပြုသည်။
Brush နီကယ်အိုးဖြည့်ဆေး faucet သို့ရောက်ရှိ
အိုးဖြည့်သည့် faucet ၏အဆင်ပြေမှုကသင်၏မီးဖိုအနီးရှိနံရံကိုဆန့ ်၍ တပ်ဆင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ dual swing အဆစ်များကြောင့်၎င်းကိုအလွယ်တကူသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏ချက်ပြုတ်မည့်နေရာကိုဟင်းချက်သည့်နေရာမှရှင်းလင်းပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မီးဖိုတွင်းရှိမည်သည့်အိုးကိုမဆိုဖြည့်နိုင်သည့်အတွက် ၂၄ လက်မနီးပါးလောက်အထိရောက်ရှိနိုင်သည် သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်အိုးဖြည့်စက်ကိုအလွယ်တကူတိုးချဲ့နိုင်ပြီး၊ သင်ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ သင်သည်ဤ brushed nickel pot filler faucet ကိုတပ်ဆင်ပြီးပါကဤပစ္စည်းကိရိယာကိုသင်မတပ်ဆင်ထားသည့်အတွက်သင်နောင်တရလိမ့်မည်။
ရေသည်အရည်အသွေးမြင့် Neoperl ABS aerator နှင့်အလွန်ချောချောမွေ့မွေ့သွားသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားဆန့်ကျင်မှုန့်နှင့်ရေယိုစိမ့်မှုကင်းသောအတွေ့အကြုံအားပေးသည်။ သင်၏အိုးကိုသင်၏ချက်ပြုတ်မီးဖို၌ရေပြည့်ပြည့် ၀၀ ဖြည့်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းကမည်သည့်အရာမှဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ရေဖြန်းခြင်းကအန္တရာယ်များသောအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်၏မီးဖိုမီးဖို၏အခြားမီးတွင်းများတွင်ချက်ပြုတ်နေသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ချက်ပြုတ်မီးဖိုသည်အမြဲတမ်းချွေတာနေပြီးမီးဖိုချောင်သုံးသည့်အခါသင့်မီးဖိုချောင်တွင်အန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အရည်အသွေး brushed နီကယ်အိုးဖြည့် faucet
ဤ brushed nickel pot filler faucet ၏အဆို့ရှင်နှစ်ခုသည်ကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်။ သင်က valves မှာလုံးဝ backlash မရှိသလိုပွတ်တိုက်မှုလည်းမရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်မှုကိုသေချာစေသည်။ သင်သည်ပျက်စီးလွယ်သောအဆစ်များရှိသည့်တိုင်၎င်းကိုအသုံးပြုထားသောနီကယ်အိုးဖြည့်ဆေး faucet ကိုအလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ Ergonomics ဒီဇိုင်းကြောင့်နံရံတပ်ဆင်ထားသောသံမဏိပြားကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သောလွှဲလက်နက်များသည်လည်ပတ်နိုင်အောင်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သည်။
၎င်း၏အဆင့်မြင့်သံမဏိပစ္စည်းသည်ဤ brushed nickel pot filler faucet ကိုကြာရှည်ခံစေသည်။ ဒီအိုးဖြည့်စွက်ဆေး၏နီကယ်မျက်နှာပြင်သည်ခြစ်ရာမရှိခြင်းနှင့်ချေးခြင်းကင်းသည်။ connectors များသည်အစိုင်အခဲသောကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းတွင်သတ္တုအကျန်များမရှိဘဲကျန်းမာသောရေစီးဆင်းမှုကိုအာမခံသည်။ ထို့ကြောင့်သင်နှင့်သင့်မိသားစု၏ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြောင့်၎င်း brushed nickel pot filler faucet ကိုစီးပွားဖြစ်နေရာများတွင်စားသောက်ဆိုင်များအဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
Brushed nickel pot filler faucet တွင်တပ်ဆင်ရန်အစုံလိုက်ပါရှိသည်။ ဒီတပ်ဆင်မှုကိရိယာနှင့်အတူသင်သည် brushed nickel pot filler faucet ကိုပြanyနာမရှိဘဲသင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤသည်ကသင့်အားစျေးကြီးသောရေပိုက်သမားကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်သည့်ကိရိယာသည်သင်နံရံတပ်ဆင်ထားသောအိုးဖြည့်စက်ကိုတပ်ဆင်ရန်သင်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ သင်၏လက်ကိုမပျက်စီးစေရန်နှင့်တပ်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်သန့်ရှင်းအောင်ထားရန် Allen လိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ Teflon တိပ်နှင့်တပ်ဆင်ထားသောလက်အိတ်များပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ brushed nickel pot filler faucet ကိုနာရီဝက်အတွင်းသင်ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်တော်တဲ့နေရာမှာရေအမှတ်ရှိမှသာ။
WOWOW သည် brushed nickel pot filler faucet ၏အရည်အသွေးကိုယုံကြည်စိတ်ချသောကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားငါးနှစ်အာမခံသက်တမ်းကိုပေးသည်။ WOWOW သည်သင်ရှာဖွေနိုင်သောငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုပေးသောကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားရက် ၉၀ ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံကိုလည်းပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်လုံးဝအန္တရာယ်မရှိပါ။ သင်သည်ဤ brushed nickel အိုးဖြည့်ဆေး faucet ကိုသင်လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကသင်အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။ WOWOW သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးသင်ချက်ချင်းသတိပြုမိနိုင်သည်။ brush in nickel pot filler faucet ၏အားသာချက်များမှာ၊
•မိနစ် ၃၀ အတွင်းလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်
SKU: 2311300 Categories: မီးဖိုချောင် faucets, အိုး Filler Faucets Tags: brushed နီကယ်, အိုး Filler, လူပျိုလီဗာ
13.56 x ကို 7.24 x ကို 1.42 လက်မ
360 ဒီဂရီလှည့်, နှစ်ဆပူးတွဲ, ခေါက်
ဒီခွက်ဖလားကိုကျွန်ုပ်လင်ယောက်ျားအတွက်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာသည်။ လှုပ်ရှားမှုသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးလွယ်ကူသည်။ ယခုအချိန်အထိအသုံးပြုရန်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ကြံ့ခိုင်ပြီးစီးဆင်းမှုသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ လွတ်လပ်စွာယိုစိမ့်သည်။ နီကယ်အပြီးသတ်လှပသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကျန်မီးဖိုချောင်နှင့်လုံးဝကိုက်ညီသည်။
L ကို *** t ကို2020-07-02
ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ဘတ်ဂျက်အတွင်းရှိသန့်ရှင်းပြီးခေတ်မီသောလိုင်းများပါ ၀ င်သောနီကယ်အိုးဖြည့်စွက်ဆေးရည်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ဒီအိုးဖြူကို WOWOW မှာရှာပြီးမပျော်ဘူး။ ဒီ faucet ကအရမ်းအရည်အသွေးကောင်းတယ်၊ တပ်ဆင်ဖို့လေပြေကြီးတစ်ခု၊ အရမ်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါတို့မီးဖိုချောင်မှာကြည့်ရတာအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ဈေးကြီးတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မပေးတော့ဘူး။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
တစ်ဦးက *** s ကို2020-07-09
အခြားပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုနှင့်အတူကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအိုးဖြည့်တင်း faucet ကိုကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လေးလံသောတာ ၀ န်ရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိ၊ တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ brushed nickle finish ကိုနှစ်သက်သည်။ ကြေးနီနို့သီးခေါင်းအရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ခဲ့သောကြောင့်အလွန်ပျော်ရွှင်သည်။
H ကို *** y က2020-07-11
F ကို *** s ကို2020-07-17
သေတ္တာစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ ၀ ယ်ယူခြင်းထက် ၃ ဆနီးပါးလောက်ဤပစ္စည်းကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ install လုပ်ရန်စူပါလွယ်ကူခြင်းနှင့်အကြီးအကြည့်!
Y က *** s ကို2020-07-18
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုအလွန်ကျိုးနွံစွာဖြင့်ပေးသောဘတ်ဂျက်ဖြင့်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်ခြင်းများပြုလုပ်နေသည်။ ကျွန်မခင်ပွန်းကစားဖိုမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမီးဖိုချောင်ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့်ပထမဆုံးစီမံကိန်းကြီးတွေထဲကတစ်ခုပါ။ မီးဖိုအထက်မှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အိုးတစ်လုံးဟာငါတို့မီးဖိုချောင်ကိုစိတ် ၀ င်စားမှုနဲ့တန်ဖိုးတွေတိုးပွားစေတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါကိုမြင်သူတိုင်းကဒီဟာကထူးခြားပြီးလိမ္မာပါးနပ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ကျွန်မအမေလာလည်ပတ်ပြီးအိုးကြီးတစ်အိုးကိုချက်ပြုတ်ချင်တဲ့အခါသူမကစုပ်မှမီးဖိုသို့ရေလေးလံသောသယ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ဤထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၏တိုးတက်ကောင်းမွန်သောဗေဒနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။
ငါတို့ကအိုးထိန်းသမားကိုချစ်တယ်၊ ယိုစိမ့်မှုနဲ့ဘာမှမပြnoနာမရှိဘူး။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်လှပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
L ကို *** တစ်ဦး2020-07-26
ဟာရီကိန်းဟာဗေးမှကျွန်ုပ်တို့အတင်းအကြပ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းခံခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ရွေးလိုက်သော“ အဆင့်မြှင့်ခြင်း” ဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏အသုံးအဆောင်ဂိုဒေါင်ထဲထည့်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ရွေ့။ မရွေ့စေဘဲဖြည့်နိုင်သည်။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။
, G *** ဏ2020-07-28
ငါ့အိမ်ကလှပပေမယ့်ယိုစိမ့်နေတဲ့အနည်းငယ်ထူးဆန်းတဲ့၊ အဟောင်းတွေ၊ ငါအစားထိုးရန်ရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်ကိုကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ အများအားဖြင့်အဆို့ရှင်ပုံစံနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ငါစျေးပေါ၌ရှိသော်လည်းလှပသောအစားထိုး, မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုမှုဖြစ်ထက်မြို့ရိုးအပေါက်ကို plug ဖို့ပို။ ဒါကဒီငွေတောင်းခံလွှာကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုက်ညီတယ်၊ ပြီးတော့သူကလုံလောက်တဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအိုးကြီးတွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက်သုံးမယ်ဆိုတာကိုငါယုံကြည်တယ်။
- စျေးသိပ်မကြီးတဲ့။ ဒီအိုးဖြည့်တာကငါ့အိုးဟောင်းဖြည့်စ်ဗားရှင်းရဲ့ ၁/၄ ထက်နည်းတယ်။
- အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဆီဖြင့်ပွတ်ထားသောကြေးဝါ (-style) အပြီးသတ်သည်ပြီးပြည့်စုံသည်။
-Functional ။ အိုးတစ်ဒါဇင်လောက်ဖြည့်ပါတယ်။
- ပြီးပြည့်စုံ။ အဆို့ရှင်နှစ်ခု၊ လွှဲလက်မောင်းနှင့်လေဆာရောင်ခြည်။
-Short ။ လက်သည်အနည်းငယ်တိုသည်၊ သို့သော်အိုးတစ်လုံးကိုစုပ်ယူခြင်းထက်ရေငုပ်စက်ထဲသို့ယာယီတွန်းတင်ခြင်းသည်နာကျင်မှုမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်လူအများစုအတွက်သင်၏မီးဖိုအ ၀ ိုင်းတွင်တိုသော်လည်း၎င်းသည်ပြaနာမဟုတ်ပါ။
သင်ပထမဆုံးနံရံအဆို့ရှင်ကိုဖွင့်လျှင် splash ။ ဒါကဒီပုံစံလားဟုတ်လား၊ မဟုတ်လားဆိုတာမသေချာဘူး၊ ငါ့ faucet အဟောင်းကိုပုပ်နေလို့ပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒီမော်ဒယ်အပေါ်ဖိအားကနည်းတယ်။ ငါနံရံအဆုံးကိုအရင်ဖွင့်ပြီးအသာပုတ်လျှင်၎င်းသည်ရေချိုးခန်းခေါင်းနှင့်တူသည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်နံရံကိုထိပုတ်ပါကမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တိုက်ရိုက်စီးဆင်းသည်။ ဒါကအသေးအမွှားလေးလေးပါ။ guests ည့်သည်တွေပြီးသွားရင်သတိထားရမယ်။
- mounting bracket ။ ကျွန်ုပ်၏ faucet အဟောင်းတွင်လက်မောင်းအတိအကျတပ်ဆင်ထားကြောင်းသေချာစေရန်ကွင်းခတ်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခုသည်မတပ်ဆင်ထားဘဲကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားသည့်တိကျသောတပ်ဆင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အခြားအလှည့်တစ်လျှောက်ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့အိုးကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်မရဲ့အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့ရေပိုက်ကိုစိန်ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါအဲဒါကိုအနိုင်ယူမယ်ဆိုရင်အဲဒါဟာပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုသံသယဖြစ်မိတယ်၊ ဒါပေမယ့် install လုပ်ထားတဲ့အဟောင်းဟာအတိအကျမှန်ကန်တယ်လို့မသေချာဘူး၊ မည်သူမျှလက်မောင်းပေါ်ယင်ထိုးနေသမျှကာလပတ်လုံး, သူကမြို့ရိုးပေါ်မှာperfectlyုံထိုင်တော်မူ၏။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါဟာအသွင်အပြင်တွေအများကြီးကိုဂရုစိုက်ပြီးရံဖန်ရံခါမှာပဲငါ့အဆာကိုသာသုံးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါနဲ့အတူ 100% ကောင်းတယ်။
, G *** င2020-08-04
ပြီးပြည့်စုံတဲ့! စျေးနှုန်းအတွက်အထူးတန်ဖိုး။ ၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသော namebrands များကဲ့သို့လေးလံသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 1/2″ အထီးအဆုံးကို waterline ပေါ်သို့ဂဟေဆော်ပြီး၎င်းနှင့်အတူပါလာသောကြေးဝါအထီး - အထီးကိုသုံးခြင်းထက် - ချိတ်ဆက်မှု (sheetrock and tile ကျော်လွန်ပြီး 1/2) ထက်ပိုသော) ချိတ်ဆက်မှုပေါ်သို့လွဲချော်လိုက်သည်။ ကျနော်တို့အခြားညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုလုပ်။ ကျနော်တို့အစိုင်အခဲတစ်ခုခုသို့တိုက်ရိုက်ဝက်အူနိုင်အောင် 1/2 "ထူ mdf ဘုတ်အဖွဲ့တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ ဤအဆင့်နှစ်ဆင့်သည် install ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်သည်။
နှစ်ခုအဆို့ရှင်အဘယ်သူမျှမယိုသေချာပါပြီ။ ကြည့်ရတာအံ့သြစရာ လက်များသည်ခုခံနိုင်သည့်ပမာဏနှင့်အတူလှုပ်ရှားသည်။ function ကိုသဘောကျတယ် the.same အရည်အသွေးပေါ်လာသောပိုမိုမြင့်မားသောဈေးနှုန်းယူနစ်များမှစုဆောင်းငွေများကိုကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ကျေနပ်အားရသည်။
နောက်တစ်ခေါက် ထပ်မံ၍ လုပ်မည်တစ်ခုမှာ ၄ င်းသည်ကျွန်ုပ်ထက် ၄″ အောက်ပိုနိမ့်သည်။ မီးဖိုအထက် ၁၆″ တွင်ရေထဲသို့အိုးထဲသို့ကျသွားရန်ရှည်လျားသောလမ်းရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ထပ်မံလုပ်ဆောင်လျှင်၎င်းကို ၁၂ closer ပိုမိုနီးကပ်စွာထည့်သွင်းပါ။
ဦး *** တစ်ဦး2020-08-14
ငါအများကြီးလျော့နည်းပိုက်ဆံများအတွက်တူညီသောဖြစ်ဟန်အခြားဗားရှင်း (လေးအတိအကျဖြစ်ဖို့) ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါနှစ်လအသစ်တစ်ခုကိုအမိန့်, ကတပ်ဆင်ထားရှိခြင်း, ကများစွာသောအချက်များကနေယိုစိမ့်ရှိသည်, ပြန်လာပြန်အမ်းငွေကိုစောင့်ဆိုင်းနှင့်အခြားအမိန့်ရှိသည်ဖို့သာဖြုန်း။ Filler ပြီးနောက် filler ပြန်ရောက်ပြီးနောက်ငါစိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါကစုပ်ယူပြီးမျှော်လင့်ခြင်းယိုစိမ့်မသွားနိုင်သည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုရရှိရန်အနည်းငယ်ပိုသုံးရန်လိုအပ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဆိုက်ရောက်သောအခါထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်မှာထားခဲ့သည့်ဒေါ်လာ ၇၀ ခေါက်ထက်ပိုကောင်းသည်။ Installation သည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ အပိုအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်ဆက်သွယ်ရမည့်ကိစ္စများ၊ ပြitနာများနှင့်ပြန်ပို့ခြင်းထက်သင့်လျော်သောအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လမ်းညွှန်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ တပ်ဆင်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်တို့မှာယိုစိမ့်မှုနှင့်အခြားပြissuesနာများမရှိခဲ့ပါ။ ငါတစ်ပြားမှပညာရှိဖြစ်နှင့်ဒေါ်လာမိုက်မဲဖြစ်ခြင်းခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ (ငါကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည့်ငါးခုမှ) တစ်ခုတည်းသောအိုးတစ်လုံးသာဖြစ်သည်။ wowow ဖြစ်ကောင်းကုန်ကျစရိတ်ထက်ဝက်အဘို့ဤအမှတ်တံဆိပ်၏ခေါက် Offs ရာပေါင်းများစွာသို့ကြည့်သူတို့ကိုပိတ်ပစ်သင့်ပါတယ်။
J ကို *** ဎ2020-08-17
အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်။ အစိုင်အခဲများနှင့်အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ ၃၀qqts အိုးကြီးတွေရှိတယ်။ ဒါကသူတို့ကိုဖြည့်တာရဲ့အဖြေပဲ။ သင်တပ်ဆင်ရန်ရေပိုက်အချို့ကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်သိရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ဤသည်မှာစတိုးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ (စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရွှေ) ကဲ့သို့စျေးနှုန်း၏ငါးပုံတစ်ပုံဖြစ်သည်။ ငါတို့ချစ်ကြတယ် အိုးများဖြည့်စရာမလိုတော့ပါ။ အစိုင်အခဲဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အပိုအဆို့ရှင်နှင့်အတူပါရှိသည်
အီး *** r2020-08-19
ကျွန်တော့်လက်ဗွေရာမရှိသောအသုံးအဆောင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းအရောင်သည်နွေးထွေးပြီးရွှေရောင်နှင့်အသစ်စက်စက်သုံးသည့်ပစ္စည်းများသည်အပြာ - ငွေပိုမိုအေးသောအရောင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြည့်ကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားခန်းများ၌ရှိသည့် faucets နှင့် shower head များကဲ့သို့သောနာမည်တံဆိပ်တပ်ထားသောနီကယ်လ်တာများနှင့်ကိုက်ညီသည် (အကယ်၍ သင်အရောင်ရင့်ငွေကိုတိုင်းတာရန်ကြိုးစားလျှင်) ။
အဆိုပါ function ကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိုးကြီးများကိုခွင့်ပြုရန်ကျွန်ုပ်၏အကွာအဝေးအထက်တွင်မိုင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ သို့သော်ရေသည်အသေးငယ်ဆုံးအိုးများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသော်ငြားလည်း၊ အိုးများထဲမှရေအားလုံးမဖြုန်းတီးပါ။
အလွန်မြင့်မားသောရေဖိအား, ယိုစိမ့်ခြင်း, အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်အပိုအဆို့ရှင်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်အမင်းစိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်လဲလှယ်မှာမဟုတ်ဘူး
ကျွန်မခင်ပွန်းအတွက်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအားလုံးတပ်ဆင်ပြီးလိုက်ဖက်တယ်။ ငါနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကိစ္စများရှိသည်နှင့်လှုပ်ရှားမှုချောမွေ့လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကြံ့ခိုင်ပြီးစီးဆင်းမှုသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ငါအရည်အသွေးနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်တယ်ငါပေးဆောင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ အကယ်၍ လိုအပ်ချက်ကသူ့ဟာသူတင်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ထပ်မံဝယ်ယူမယ်
ငါတို့ရဲ့ကန်ထရိုက်တာကဒါကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲလှပတဲ့အိုးကြီးဖြစ်ပေမယ့်ကံမကောင်းတာကဒီပေါက်ကြားမှုကြောင့်ပါ။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကသူချက်ချင်း install မလုပ်ဘူး။ အခုငါပြန်ပို့လို့မရဘူး။ တကယ်တော့ဒီ potfiller ၏အသွင်အပြင်နှင့်က၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုချစ်။
အီး *** s ကို2020-09-02
ငါတို့ချစ်တယ် ၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားသောရေပိုက်သမားတစ် ဦး ရှိပြီး၎င်းသည်ကျက်သရေနှင့်တူသည်။ ခေါက်ဆွဲနှင့်အာလူးများကိုစည်သွတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆူပွက်သောအခါသက်ကြီးရွယ်အိုမိခင်က၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ သူမသည်ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာရှိပြီးရေစုပ်ပြီးအိုးတစ်လုံးလုံးကိုမသယ်ဆောင်နိုင်ပါ။
အီး *** ဎ2020-09-07
အိုးဖြည့်စက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးဖောက်သည်များထံမှ ၀ ယ်ယူမှုအထောက်အပံ့သည်ထူးခြားသည်။ ငါဒီထုတ်ကုန်ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ငါပိုပြီးမပျော်နိုင်ဘူး! ကျိန်းသေသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ခြင်းနှင့်ငါသိအားလုံးအကြံပြုဖို့ !!
R ကို *** ။2020-09-11
အိုး Filler ကိုချစ်။ ငါနောက်ကျောနံရံဘေးတွင် spigot ကိုအသုံးပြုပါ။ အိုးထဲမှာရေပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အနည်းငယ်သာအားစိုက်ထုတ်ခြင်းနှင့်အိုးကျော်ထွက်ရွှေ့နှင့်နောက်ကျောနံရံမှ
M က *** ဃ2020-09-16
အရင်ကငါတို့မှာအိုးတလုံးမထည့်ဖူးဘူး။ ဒါကအသစ်အဆန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအိုးဖြည့်တာကောင်းကောင်းလုပ်ထားတယ်။ ငါတို့မီးဖိုချောင်အသစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။